Tuesday, 22 May, 2018 10:41 AM
धेरैजसो नाम, दाम र शानका लागि कलाकारिता रोज्छन् । तर, अभिनेत्री तथा मोडल बबिता फोम्बो भने आफ्नो संस्कृति संरक्षणका लागि गन कलाकारिता गर्छिन् । भारतको लखनउमा जन्मेकी बबिताले सानैदेखि नृत्य गर्थिन् । नृत्य, मोडलिङ र अभिनयमै दशक बिताइसकेकी बबिताले ‘अम्लारी फूङ’ र ‘हेल्लुक्वाः’जस्ता लिम्बू भाषाका चलचित्रलगायत दर्जनौ म्युजिक भिडियो र र्याम्प शोमा हिडिसकेकी छन् । यिनै बबितासँग जम्काभेटमा एमपी सुब्बाले गरेको कुराकानी :
ग्ल्यामरस क्षेत्र कस्तो लागिरहेको छ ?
रमाइलो । यो क्षेत्र नै ग्ल्यामरस । मान्छेहरु पनि त्यस्तै खालका सँग भेटघाट हुन्छ । त्यसैले रमाइलो हुन्छ ।
कलाकारिता सुरु गरेका कति भयो ?
सानैबाट नृत्य गर्थेँ । तर, म कलाकार अर्थात मोडल वा नायिका बन्छु भन्नेचाहिँ सोचकी थिइनँ । नृत्य गर्दै जाँदा यो क्षेत्रमा आएँ ।
कसरी कलाकारिता अँगाल्नु भयो त ?
५/६ कक्षा पढ्दै नृत्य गर्थेँ । सोही क्रममा १६ वर्षकै उमेरमा म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गर्ने अवसर पाएँ । त्यसपछि लिम्बू भाषाको फिल्ममा अभिनय गरेँ । मलाई लाग्यो कि, कलामार्फत आफ्नो संस्कृति र भेषभूषाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । आज त्यही सोचले कलाकारिता गर्दैछु ।
नृत्य, अभिनय र मोडलिङमध्ये तपाइँको प्राथमिकता कुन हो ?
नृत्य मेरो सानैदेखिको रुचि हो । नृत्यपछि अभिनयमै मेरो बढी रुचि छ ।
¥याम्प शो र म्युजिक भिडियो पनि गर्दै आउनुभएको छ नि ?
हो, मैले बढी गर्ने भनेकै म्युजिक भिडियो र ¥याम्प शो हो । म्युजिक भिडियोजस्तो धेरै फिल्म बन्दैन । त्यसैले आफूलाई व्यस्त बनाइराख्न भिडियोमा मोडलिङ गर्दै आएकी छु ।
ग्ल्यामरस क्षेत्रको राम्रो–नराम्रो पक्ष भन्नुपर्दा ?
यो क्षेत्रको जति राम्रो पक्ष छ, उत्ति नै नराम्रो पक्ष पनि । केही खराब व्यक्तिहरुले गर्दा समाजले ग्ल्यामरस क्षेत्रका महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइसकेको छ । कलाकारिताको राम्रो पक्ष भनेको आफू मरेर गएपनि नाम रहिरहन्छ । साथीभाई कमाइन्छ ।
यो क्षेत्रमा लागेर केही नराम्रो बेहोर्नु भएको छ ?
कति हो कति । धेरै निर्माता÷निर्देशकले फिल्म बनाउँदैछु । भेट्न आउ, हिरोइन बनाउँछु भने । त्यो नराम्रो दृष्टिले भनेका थिए । नाम भन्न मिल्दैन । फ्रुप चाहिन्छ । मसँग फ्रुप भएको भए मैले जानेकी थिएँ तिनीहरुलाई ।
निर्माता तथा निर्देशकको शर्त मानेको भए अहिलेसम्म कति फिल्म गर्नुहुन्थ्यो ?
पुग्थ्यो होला ढेड दर्जन । तर, मलाई कसैको शर्त मानेर फिल्म गर्दिनँ । मलाई नाम चाहिएको छ्रैन । म यो क्षेत्रमा आफ्नो कला संस्कृति संरक्षणका लागि आएकी हुँ ।
कला संस्कृति संरक्षणमा के योगदान गर्नुभयो त ?
मैले दु्ई वटा लिम्बू भाषाका फिल्म गरेँ अनि थुप्रै लिम्बू गीतको भिडियोमा काम गरेकी छु । जसमार्फत आफ्नो भाषा, कल्चर र भेषभूषाको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगेको छ जस्तो लाग्छ । त्यस्तै, हालै ‘केः’ नामक लिम्बू भाषाको शर्ट फिल्ममा अभिनय गरेकी छु । उक्त फिल्मले लिम्बू समुदायको कल्चरल नाच ‘केलाङ’ अर्थात च्याब्रुङ नाचलाई प्रवद्र्धन गरेको छ ।
कहिलेसम्म कलाकारिता गर्ने सोच छ ?
उमेर भइरञ्जेल अर्थात वैंश हुँदासम्म । त्यसपछि सोच्नुपर्ला ।
घरजम गर्ने उमेर भएजस्तो छ, के सोच्दै हुनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म केही सोचेकी छैन । छोरी मान्छेको उमेरचाहिँ नसोध्नु । अझै केही वर्ष ग्ल्यामरस क्षेत्रमै रमाउने मेरो धोको छ ।
घरबाट दवाव आएको छ्रैन र ?
दवाव त आइहाल्छ नि । छोरी मान्छे हो । विवाह गर्ने उमेर भयो भन्छन् । माग्न पनि कति आए, कति गए । तर, सबै ठट्टामै उडाएर पठाएँ ।